Masinina manapaka laser vita amin'ny laser - Laser laser
Ny milina fanapahana laser amin'ny fibre dia fitaovana mora vidy, mora ampiasaina, ary be mpampiasa ampiasaina amin'ny fanapahana haingam-pandeha takelaka sy fantsom-by. Izy io dia afaka manampy anao hanomboka asa fanombohana vaovao na hampitombo ny tombom-barotra amin'ny orinasanao efa niorina tsara.
Ny milina fanapahana laser fibra antsika dia mety amin'ny fanapahana vy vy, vy vy, vy firaka, vy lohataona, alimo, varahina, varahina, vy nandrisika, sns. fantsona, fiara mandeha amin'ny fiara, kojakoja fanaovana fanatanjahan-tena, milina fambolena sy ala, milina sakafo, dokam-barotra, valizy elektrika, ascenseur ary indostria hafa
Masinina fanapahana laser fibre habe kely indrindra
Masinina fanapahana laser fantsona farafahakeliny P1260A, miaraka amina rafitra mpamatsy fiara manokana. Mifantoha amin'ny fanapahana fantsona kely.
Milina Tube Laser Fibre Tube
P120 dia milina fanapahana laser manokana ho an'ny fantsom-boribory (fantsona boribory). Natao manokana hanoloana ny milina fanovozana amin'ny indostrian'ny faritra misy motera, ny indostrian'ny fantsom-pifandraisana sns.
Masinina fanapahana fantsom-boalavo fibre laser automatique bundle Loader
Masinina fanapahana laser fantsom-batana avo lenta miaraka amin'ny famoahana sy ny famoahana azy. Manapaka mombamomba ny boribory, mahitsizoro, toradroa ary fantsona hafa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fanapahana fantsona.
Ity milina fanapahana fantsom-boaloboka semi-automatique ity dia miaraka amina loader manual sy fonosana feno hamokarana faritra avo lenta amin'ny endrika sy habe.
Metal Sheet sy Tube Fiber Laser Cutting Machine
Ny famolavolana Integrated dia manome ny asan'ny fanapahana roa ho an'ny ravina vy sy fantsom-by. Herin'ny laser 1KW ~ 3KW, faritra fanapahana 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, halavan'ny Tube 3m, 4m, 6m, Φ20-200mm
Pipeo Changer Fibre Fibre Laser Sodina feno sy milina fanapahana metaly
Masinina fanapahana laser vita amin'ny fibre avo lenta miaraka amin'ny fonony miaro feno, latabatra fifanakalozana ary fitaovana fanapahana fantsona. Ny takelaka vy sy ny fantsom-by dia azo tapahina amin'ny masinina iray ihany.
Indrindra ho an'ny laser fanapahana fantsom-by vy boribory, toradroa, mahitsizoro, telozoro, boribory boribory, fantsom-boaloboka ary fantsona & fantsona miendrika hafa. Ny savaivony ivelany fantsona dia mety 20-200mm, lava 8m.
6000W 8000W Laser Cutting Machine
Hery lehibe sy fanapahana laser fibre endrika lehibe. Controller BOCKHOFF CNC. 2.5m × 6m, faritra manapaka 2.5m × 8m. Ny hatevin'ny fanapahana 30mm CS, 16mm SS
Masinina fanapahana laser vita amin'ny fibre feno miaraka amin'ny Pallet Changer
Masinina fanapahana laser misy latabatra fanovana. Famolavolana fonosana. Generator laser fibre IPG / nLIGHT 2000W. Hetezo vy tsy misy fatrany max 8mm, 1 ...